Taliyaha Ciidanka Booliska oo kormeeray goob lagu qorayey dhalinyaro kusoo biirayey Ciidanka Booliska“Sawirro” – Radio Muqdisho
Taliyaha Ciidanka Booliska oo kormeeray goob lagu qorayey dhalinyaro kusoo biirayey Ciidanka Booliska“Sawirro”
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed “Ameeriko” oo uu weheliyo Taliyaha dugsiga tababarka Booliska iyo Saraakiil kale, ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay Dugsiga Gen. Kaahiye.
Dugsiga ayaa waxaa ka socday Qorista Ciidamo cusub oo kusoo biiraya Ciidanka Booliska, waxaana Taliyaha oo tagay goobta lagu diiwaan galinayey Ciidanka cusub uu xog wareystay dhalinyaradaasi ciidanka kusoo biirayey.
Dhalinyaradaasi, ayaa si iskood ah usoo dalbaday inay ka mid noqdaan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Waxaana Taliyaha Ciidanka Booliska mar uu la sheekeysaneyey ay u sheekeen in ay diyaar u yihiin difaaca dalka.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed “Ameeriko” oo la hadlay dhalinyarada maanta loo qorayey Ciidanka Booliska, ayaa sheegay in ay tusaale u yihiin Bulshada, maadaama ay xil iska saareen Difaaca Qaranka, iyaddoo aysan jirin cid ku qasabtay.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo maanta tababar loo furay “Sawirro”